Inde: Awaaz.De – Mitondra Ny Feon’ireo Vondrom-piarahamonina Anjorom-bala Sy Taraiky · Global Voices teny Malagasy
Inde: Awaaz.De – Mitondra Ny Feon'ireo Vondrom-piarahamonina Anjorom-bala Sy Taraiky
Voadika ny 08 Mey 2012 13:35 GMT
Ambany taham-pidirana aterineto any amin'ireo firenena tahaka an'i Inde, indrindra any amin'ireo vondrom-piarahamonina anjorom-bala. Ho an'ny faritra ambanivohitra mahantra dia mbola lavitra ny lalana hahazo fotodrafitrasa tsara sy fahafahana miditra anaty aterineto. Miady mba hahatratrarana ireo vondrom-piarahamonina mitoka-monina sy elanelanin'ireo fiteny ao an-toerana ireo fikambanana samihafa. Matetika no ambany dia ambany ny tahan'ny fahaiza-mamaky tenin'ireo olona ireo ary voafetra ny traikefan'izy ireo amin'ny teknolojia fampahalalam-baovao. Na eo aza izany dia avo ny fidiran'ny finday ary mety hamaha ny olana amin'ny ezaka fampivoarana mifototra amin'ireo ICT any an-toerana.
Rindrambaiko mitondra fomba vaovao ny Awaaz.de (rafitra Famaliana amim-peo “interactive” ampiasàna ny voice-XML) izay mamela ireo fikambanana fampandrosoana hifandray amin'ireo vondrom-piarahamonina mahantra, tambanivohitra sy anjorom-bala amin'ny alalan'ny fanomezana vaovao ho an'izay mangataka izany amin'ny finday. Afaka miditra ao amin'ny rindrambaikon'ny Awaaz.De ny olona amin'ny fanoratana ireo laharan'antso mahazatra mba hiasana miaraka amin'ireo rakipeo amin'ny alalan'ireo “interface”-na feo mandeha ho azy. Rehefa miantso ny tantsaha iray, maheno feo fandraisana izy ary angatahana hampiditra laharana avy ao amin'ny bokotra fitendry na manonona teny iray mba hidirana amin'izany. Dinganin'ireo rindrambaikom-peo ireo ny fetra farany ho an'ny teny , manome tolotra amin'ireo tenim-paritra ary misoroka ireo fetran'ny fahaizana manoratra sy mamaky teny.
I Neil Patel sy i Tapan Parikh no namorona ny Awaaz.De roa taona lasa izay. Ny ezak'izy ireo voalohany tamin'izany dia ny Avaaj Otalo, loharano malalaka iray, sehatra mifototra amin'ny feo ho an'ireo tantsahan'i Gujarati. Araka ny fandinihana ny raharahan'ny Mobile Active:
Manolotra fomba telo fampiasàna azy ny Avaaj Otalo. Rehefa miantso ireo tantsaha dia afaka, na mihaino ny fandaharan'ny radio DSC isan-kerinandro izy ireo, na mihaino ny fanambaran'ireo mpandrindra ao amin'ny DSC napetraka manokana ho an'i Avaaj Otalo, na koa mandray anjara anatin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra “fanontaniana-valiny”. Natolotra ho azo karohana sy tetezina ireo rakitra sy fanambarana.
Araka ny bilaogin'ny Toby Famatsiam-bola Madinika “, afaka mandeha lavitra noho ny resaka fambolena io tetikasa io ary manana fiantraikany tsara eo amin'ny toe-pahasalaman'ireo mpamboly satria hivadika hampiasa ireo famonoana biby kely izay mampihena kokoa ny olana ara-pahasalamana ry zareo”.
Sary an'i AngelList
Ary araka izany dia mampiàsa fanampian'ny hafatra am-peo ao aminy ihany koa ny Awaaz.de ary miasa ho an'ireo fikambanana fampandrosoana maro mpanjifa azy manerana ireo fanjakana 6 any Inde mba hitantanana famotopotorana, fanentanana ary tolotra hafa ho azy ireo. Tafiditra ao anatin'ireo tolotra ireo ny famotopotorana amin'ny alalan'ny finday, hafatra aparitaka ho an'olona voafantina na midadasika, ny fanaraha-maso ny fampiasàna sy ny fikendrena iireo mpanjifa miaraka amina tatitra feno sy mora takarina ho azy ireo. Loharano misokatra avokoa ireo rindrambaiko rehetra ary nomena ho tolotra ampiantranoana amin'ny endrika end-to-end. Manazava i Tapan Parikh ao anatin'ny bilaogy Ushahidi:
Ampiasain'ireo mpandrindra ilay vondrom-piaraha-monina ny drafitrasa mipetraka eto anaty aterineto mba hampanara-dalàna sy hanasokajy ny zavatra avoakan'ireo mpampiasa, hanamora ny fizarana fahalalana sy hanaparitaka ireo filazana miantefa amin'ny olona voafaritra, sady mamorona angona sy rakipeo momba an'ireo mpampiasa sy ny fiteny ao an-toerana. Eto no ahitanao famaritana amin'ny antsipirihany kokoa ny fomba fiasan'ny Awaaz.De.
Ito misy lahatsary manasongadina an'i Neil Patel, izay manazava ny favatra ataon'ny Awaaz.de.
Miangavy anao hanaraka ny Awaaz.de ao amin'ny Twitter sy Facebook.